Akshay Kumar oo taageerayaashiisa Soomaalida la hadlay - BBC News Somali
Akshay Kumar oo taageerayaashiisa Soomaalida la hadlay
Lahaanshaha sawirka SONY PICTURES
Image caption Akshay Kumar
Wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato ayaa Akshay weeydiiyay in uu ka warhayo in aflaamtiisa laga daawdo Soomaaliya, wuxuuna yiri "Runtii ma aanan ogeyn in ay Soomaalida i daawadaan, balse arrintaas waan ku faraxsanahay, waxaanan rajaynayaa in aan mar imaado Soomaaliya" .
Lahaanshaha sawirka Akshay Kumar
Image caption Akshay iyo Xaaskiisa Twinkle oo filimka soo saartay iyo Arunachalam Muruganantham ninka ay qisadu ku saabsantahay
Akshay ayaa waxa uu jiley filimkii ugu horeeyay oo looga hadlo caadada dumarka oo dhawaanta soo baxaya, waxaana la'is weeydiinayaa in majaajilada ay jabin karto xeendaabyada adag ee ku xeeran caadada oo dad badan ay u maleeyaan arrin ceeb ah.
Daawo: Akshay Kumar oo u mahadceliyay taageerayaashiisa Soomaalida ah
La'aanta xafaayadaha ka qeybqaata nadaafadda qofka dumarka ah ayaa waxa ay saamaysay illaa 300 milyan dumar ah dalka Hindiya, kuwaas oo halis ugu jira cuduro, dhalmo la'aan, iyo waliba geeri.
Balse sanadkii 2006-dii ayuu soo saaray makiinado cusub oo lagu sameeyo xafaayadaha, isaga oo qiimo jaban ku siiyay ururada haweenka Hindiya iyo hay'adaha maxaliga ah ee arrimaha dumarka ka shaqeeya
Maanta illaa 40 milyan oo dumar ah oo reer Hindiya ah ayaa ka faa'iideysta makiinadahan, waxaana jira qorshayaal lagu gaarsiinayo dalalka Kenya, Srilanka , Nigeria iyo Bangladesh.
Lahaanshaha sawirka ARUNACHALAM MURUGANANTHAM
Image caption Arunachalam Muruganantham iyo makiinadda suufka caadada
"Waxaan u arkay in sheekadan ay tahay mid mudan in ay gaarto guri kasta oo Hindiya ku yaala, iyo adduunkaba, sababtoo ah waxaan u malaynayaa in ceebeynta caadada aysan ahayn wax Hindiya ku kooban, balse gaarsiisantahay aduunka oo dhan" ayay tiri Twinkle.
Wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato oo qadka taleefoonka magaalada Mombay ku wareystay Akshay Kumar ayaa weeydiiyay waxa ku kalifay in uu jilo filimka Padman, wuxuuna yiri "Waxaan ogaaday in dad badan oo reer Hindiya ah aysan heysanin musqulo, banaanada iyo xeebaha ayay ku saxaroodaan, sidaasi si la mid ah waxaan ogaaday in boqolkiiba 54% ay dumarka Hindiya heysanin suufka nadaafadda ee caadada loo isticmaalo".
Wuxuu intaas ku daray "Intooda badan ma awoodaan, waxayna adeegsadaan carrada, dambaska, iyo maryo wasaq ah, waana xaqiiq jirta oo ay tahay in aan wax ka sameeyo".
Sidoo kale waxaa la weeydiiyay waxa uu ka yaqaano Soomaaliya, wuxuuna yiri "Waxaan ogahay in ay Soomaaliya tahay dad aad u qurux badan, waxaan aad ula cajabay quruxda xeebaha Soomaaliya, waxaan kaloon ogahay in caasimaddu tahay Muqdisho".